China Custom Silicone ma ọ bụ Rubber Products maka Ọdụdọ ma ọ bụ Electronic Products rụpụta na Factory | Chengda
Omenala Silicone ma obu Rubber Ngwaahịa maka Ngwa eletriki ma obu Electronic
A na-ejikarị ngwongwo silicon eme ihe na eletriki na eletrọniki, ụlọ ọrụ ụgbọ ala, nke a na-eji dị ka ogige nchebe, okwu ikpe, keypads, washer na gasket, caps na plọg wdg Anyị emeela ọtụtụ akụkụ silicone ahaziri maka ndị ahịa anyị.
Ngwaahịa Aha Omenala Ngwaahịa Silicone ma ọ bụ Rubber maka Eletriki ma ọ bụ Ngwaahịa Kọmputa
Atiya ngwaahịa roba kpụrụ ngwaahịa
Ihe onwunwe Silicone, EPDM, NBR wdg.
Nha All size na ọkpụrụkpụ dị.
Udi ike nke niile shapes dị ka kwa ịbịaru
Agba Natural, nwa, Pantone koodu ma ọ bụ RAL koodu, ma ọ bụ dị ka kwa ahịa si samples ma ọ bụ chọrọ
Ekweghị ekwe 20 ° ~ 90 Celsius Shore A, na-abụkarị 30 Celsius ~ 80 Celsius Shore A.
Ọdịdị ihu n’elu Mmanụ (VDI / MT ọkọlọtọ, ma ọ bụ mee ka ndị ahịa si n'omume), egbu maramara (elu polish, mirror polish), ezigbo, sere, ntụ ntụ mkpuchi,
ibipụta, electroplating wdg.
Ihe osise 2D ma ọ bụ 3D draiwng na ihe oyiyi ọ bụla / usoro eserese dị mma
Ihe nlele efu Eeh
OEM / OEM Eeh
Ngwa Eletriki na eletriki, maka ugbo ala dika GM, Ford, Renault, Honda. Igwe, ụlọ ọgwụ, petrochemical, ndị agha na Aerospace
Ahia Europe, North America, Oceania
Asambodo ogo FDA, EGO, ROHS, SGS
QC Ọ bụla iji mmepụta ga-enweta ihe karịrị ugboro 10 mgbe nile ego na 5 ise ugboro random ịlele site anyị ọkachamara QC. Ma ọ bụ site
Nke atọ nke ndị ahịa họpụtara
Ebu Nkedo Usoro Pịa ebu
Ngwa 350T agụụ ịpị igwe na ndị ọzọ na ịpị igwe na 300T, 250T na na
Ngwa ule na nyocha Onye na-enyocha esemokwu nke Rubber, Ngwaọrụ vulcanization, Durometer, calipers, oven
Oghere Oghere 1 ~ 400
Ebu Ndụ 300,000 ~ 1,00,000 ugboro
Mmepụta Ike imepụta ihe mechaa ọ bụla ebu ngwaahịa na 3 nkeji na-arụ ọrụ na 3 na-agbanwe n'ime 24 awa
Ebu ụzọ oge 15 ~ 35 ụbọchị
Sample ụzọ oge 3 ~ 5 ụbọchị
Oge mmepụta ọ na-abụkarị 15 ~ 30 ụbọchị, ekwesịrị ikwenye tupu ịnye iwu
N'ọdụ ụgbọ mmiri n'ọdụ ụgbọ mmiri Shanghai, Ningbo ma ọ bụ dị ka achọrọ
1. Mmanụ mkpuchi (Matte ezigbo mkpuchi): Anti- ájá & nwee ezigbo mmetụ mmetụta
2. Mbipụta (Silk obibi, mpe mpe mpe akwa, mbipụta mbufe mmiri, mbipụta okpomọkụ na-ebufe, mbipụta 3D)
3. Logo embossed logo, debossed logo, biri ebi logo
Site na usoro ọhụụ na ahụmịhe maka imepụta ngwaahịa jikọtara yana itinye ego na nyocha na mmepe, a na-etinye Chengda nke ọma iji nyefee azịza na mmekọrịta ndị ahịa na mmekọrịta chiri anya.
Site imewe na prototyping ka sourcing na nnyefe, omenala akụkụ ndị anyị ọpụrụiche. N'iji ngwanrọ kọmpụta dị elu dị ka PROE, CAD, UG, CREO na Solid Works, anyị nwere ike iji obi ike mepụta ngwaahịa na-echebara ihe ndị ahịa chọrọ anya ebe ị ga-enweta ngwaahịa kachasị mma.
Nke gara aga: Omenala karịrị Silicone na Ngwaahịa Rubber
Osote: ODM na OEM silicone roba ngwaahịa